नेकपाका नेताहरु गिरफ्तारी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विरोध – www.janabato.com
नेकपाका नेताहरु गिरफ्तारी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विरोध
१७ असार २०७५, आईतवार ०४:४८ July 1, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । कुनैबेला भोल्टायरले भनेका थिए–“तिम्रो विचारसंग म सहमत नहुन सक्छु तर तिम्रो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारका लागी म बलिदान दिन पनि तयार छु ।” भोल्टायर कुनै कम्युनिष्ट नेता थिएनन् । तर उनले सवैका फरक विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारप्रति सचेत थिए । ओली–दाहालले आफुलाई कम्युनिष्ट दावी गर्छन् तर उनीहरुको जीवनशैली र क्रियाकलाप कम्युनिष्ट नभएर दलाल बुर्जुवा र फासिष्ट बन्दै गएको छ । अझ पछिल्लो पटक ओली–दाहाल सरकार नेकपा विरुद्ध कठोर भएको छ ।
शनिवार राजधानीमा नेकपाले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’, पोलिटब्युरो सदस्यद्धय भरत बम र पदम राई, केन्द्रीय सदस्य मकर गुरुङ सहित झण्डै ५० जनालाई पक्राउ ग¥यो । नेकपा निकट जनगणतान्त्रिक सम्पर्क समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रत्न मगर, अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव धिरेन्द्र उपाध्याय ‘भृकुटी’ लगायतलाई समेत पक्राउ ग¥यो । नेता भरत बमलाई सुन्धाराबाट पक्राउ ग¥यो । पक्राउ गरे लगत्तै ओली सरकार फासीवादी बनेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । मानवअधिकार संघसंस्था लगायत देशभक्त, राष्ट्रवादी शक्तिहरुले सरकारको फासीवादी शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । गिरफ्तार विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र विरोध भएको छ ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय अध्यक्ष बन्धु चन्दले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्–“नेकपाको धुबिकरण कार्यक्रमबाट पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष कमरेड असारे काका ,पिबियम कमरेड पदम राई,सिसियम कमरेड मकर गुरुङ ,अनेम संघ क्रान्तिकारीकि केन्द्रीय महासचिव धिरेन्द्रा उपाध्याय लगायत दर्जनौंलाई कार्यक्रम स्थलबाटै गिरफ्तार गरिएको छ । आजै काठमाडौबाट बिबेकशिल साझा पार्टीका उज्ज्वल थापालाई गिरफ्तार गरियो भने डा. गोबिन्द के सी लाई जुम्लाबाट गिरफ्तार गरियो । सन्दर्भ प्रसङ्ग र उद्देश्य फरक भएपनि यी सबै राज्य आतंक हुन् । दुईतिहाईको बामपंथी भनिने सरकार बनेपछिका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ यो देशमा गणतन्त्र होइन, नैतिकहिन लुटतन्त्र र बिबेकहिन दमनतन्त्र चलिरहेको छ । हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेत नपाउने हो भने नागरिकले यसलाई कसरी लिने ? आवेगमा कसैले भन्न सक्छ यो भन्दा राजतन्त्र ठिक । तर त्यो ठिक कुरा होइन । पछाडि फर्केर समस्याको समाधान हुदैन । समस्याको समाधान अगाडि बढ्ने विकल्प खोजेर मात्र हुन्छ । त्यसैले सम्पुर्ण सचेत नेपाली जसले देश, समाज, बर्ग र परिवर्तनको अपेक्षा गर्दछन् । सबैले यो दमनतन्त्र र लुततन्त्रको विरुद्धमा केही सोच्ने हो कि ?”
सञ्जालमा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका महासचिव एवं लेखक खेम थपलियाले लेखेका छन्–“खपु सरकारले गर्न खोजेको के ? तिमी आफैंले लेखेको संविधानको पालना त गर खपु । नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई स–सम्मान तुरून्त रिहा गर । यो खपु सरकारले संविधान पढेकै छैन जस्तो लाग्यो । हुन त इन्डो–सिआईए डिजाइनमा बनेको खपु सरकारले योभन्दा अरू के पो जानेको छ र ! ”
त्यसैगरी नेकपाका नेता एवं पूर्व कलाकार उभारले भनेका छन्–“खपु सरकार अझै फासिवादी बन्दैजा, अझै दमनकारी बन्दैजा, अझै निरंकुश, अधिनायकवादी र तानाशाही बन्दैजा । साम्राज्यवादको लङ्गौटी बनेर अझै जनअधिकारलाई अपहरण गर्दैजा । दमनले कुनैपनि सत्ता टिकेनन, टिक्दैनन र टिक्नेछैनन भन्ने सत्यता पनि बिर्सिदैजा । ए खपु (खड्गप्रसाद–पुष्पकमल) सरकार ! तिमीहरु आफैले संविधानमा सुनिश्चित गरेको भेला, सम्मेलन, बिरोध, प्रदर्शन, वाक स्वतन्त्रता, राजनैतिक अधिकारमाथि नाङ्गै भएर झन् झन् किन क्रुर बनेको ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुलाइ हिजो दिउँसो काठमाडौमा एउटा भब्य कार्यक्रम मार्फत स्वागत र प्रवेश गराउने कार्यक्रमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रिय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष क. असारे काका, पार्टी पिबिएमद्वय क. पदम राइ र भरत बम लगायत ४१ जना कमरेडहरुलाइ किन कार्यक्रम स्थलबाटै गिरफ्तार गरेको ? भने प्रश्न गरेका छन् । त्यसैगरी लेखक रोशन जनकपुरी, धु्रव रुपाखेती लगायतले विरोध गरेका छन् ।
फासीवादी सत्ताले गरेको गिरफ्तारी विरुद्ध प्रतिरोध गर्न विप्लव नेकपाको अपील (विज्ञप्ती सहित) →
प्रदेश नं. ५ मा हिउँदे अधिवेशन सुरु, दुई विधेयक पेश
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार ०१:५९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on प्रदेश नं. ५ मा हिउँदे अधिवेशन सुरु, दुई विधेयक पेश
नेकपा रुपन्देहीले फागुन १ गते बुटवलमा जनयुद्ध दिवस मनाउने
२९ माघ २०७४, सोमबार ०५:५३ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नेकपा रुपन्देहीले फागुन १ गते बुटवलमा जनयुद्ध दिवस मनाउने